Bonke abesifazane bafuna ukubukeka bephelele. Futhi lokhu kuyiqiniso ngempela! Namuhla ubuhle uKim Kardashian banquma ukwabelana nathi izimfihlakalo zakhe ezincane. Uthi konke kusezandleni zethu. Futhi, uma sifisa, singaba unkulunkulukazi wobulili kubantu. Ngakho ake silalele ngokucophelela iseluleko saleso model.
UKim waziwa wonke umuntu njengomdlali wezithombe ezinhle, imodeli yemfashini kanye nesilwane sonyama nje sezwe. Wabamba iqhaza kule nkathi yesishiyagalolunye ye-show yangempela "Imidanso nge-Constellations (USA)". Le ntombazane idume kakhulu futhi inhle kakhulu. Akunakwenzeka ukuba angaboni. Ngakho kufanelekile ukuthatha iseluleko sakhe ngenothi. Namuhla, ukunakwa kwakho kunikezwa amathiphu we-tip-10 avela ku-Kardashian.
Kanye njalo ngemva kwamasonto amathathu, uKim uya esikhwameni esihle kakhulu se-salon, u-Anastacia Soar. Intombi yakhe kuphela ithembela izinkolelo zakhe ezinhle. Ngaphambili, wayehlale ewaqothula, kodwa ngemuva kokuba enze u-Anastacia, akakwazi nje ukwenza lokho ngokwakhe. Le ntombazane yenza ubuhlungu be-wax epilation yezwe, bese ihlwitha.
Ungakhipha amahle akho ekhaya. Izinwele kudingeka zithathe eduze komsuka, nesandla samahhala sokuqinisa isikhumba. Ukuze uzizwe ubuhlungu, sincoma usebenzisa ukucindezela okushisayo noma okubandayo. Ungasebenzisa i-wax epilation, njenge-salon. Le nqubo ilula kakhulu, bhekana nomunye. Manje kunesidingo esikhethekile sokusika. Ngemuva kwenqubo, gcoba i-brow ngamafutha noma ukhilimu.
Musa ukugeza izinwele zakho nsuku zonke
Namuhla, izinkampani eziningi zezimonyozi zisinikeza ama-shampoos ukuze sisebenzise nsuku zonke. Ngisho noma unezinwele ezinamafutha, kufanelekile ukugcoba izinwele zale nqubo yansuku zonke. Inqubo enjalo ingaholela ekomeni ngokweqile kwezinwele. Futhi lokhu kusho ukuthambekela, futhi. UChris McMillan - u-stylist u-Kim akaphakamisi amantombazane ukuthi ahlanze izinwele zabo nsuku zonke. Lokhu kuyathinta kakhulu isakhiwo sabo. Kubalulekile ukuwageza njalo emva kwezinsuku ezimbili. Futhi ngenkathi usebenzisa i-shampoo elula ne-conditioner. Kanye kanye ngesonto kufanele usebenzise i-mask ukuze uthole ukudla okujulile nokuphuthumayo.
Ukulungiselela amajwabu amehlo okwenziwe
Yiqiniso, lokhu akuseyona imfihlo yabesifazane abaningi, kodwa yonke ingonyama endala isikhumbuza ukuthi ngaphambi kokudweba izithunzi ozozilungiselela ukulungiselela amakhulu eminyaka. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa ngokucophelela i-powder kubo. Ngenxa yalokhu akuqambi, izithunzi zizohlala zingcono kakhulu futhi zihlale isikhathi eside usuku lonke.
Uma ubheka uKim Kardashian, ngokushesha uqaphele ukuthi amehlo akho ayi-ereq. Kuyinto engenangqondo ukubheka kude nabo. UKim uvumile ukuthi ngezinye izikhathi angasebenzisa izinsizakalo zokwandiswa kwe-eyelashi. Yena ngokwakhe akazange afunde ukubamba i-cilia. Kodwa akusikwesabeki kakhulu. Imodeli ikukwazisa ukuthi uma upende nge-high quality ikhino amehlo akho, azoba enhle.
Le ntombazane yathi isebenzisa amagama anjalo njenge-MAC noma i-Lancome. Ibeka i-mascara ezinqabeni eziningana. Benza amehlo agxile ngokucacile, futhi ama-eyelashes abukeka eside futhi enamahloni!
Ukufuna i-lipstick ephelele nephuzi
Uma ubheka ubuso bukaKim, khona-ke kuphelele nje. Izindebe zakhe zihlale ziheha abantu. U-Kim weluleka ukukhetha umthunzi we-lipstick ne-glitter ukukhanya kancane kunombala wezindebe zakho. Kungcono ukuthenga i-lipstick yemikhiqizo eyaziwa kahle. Kufanele isetshenziswe kalula ezindebeni futhi ingasabi. Ngakho ukhethe ngokucophelela wena.
Kodwa ungakhetha kanjani u-blush? Izitayela zeluleka ukuzitshela uhlathini, futhi ubone ukuthi umbala owenziwe esikhumbeni. Kuzo futhi ulandele isiqondiso lapho uthengisa ubuhlungu. Kulula kakhulu! Ungathengi imibala egqamile kakhulu, ngokushesha ukugcizelela ukungapheleli kwesikhumba.
Kubaluleke kakhulu uma usebenzisa i-make-up ukuze ucabangele idivayisi eyodwa yobuhle. Abaculi bezingcweti uKim baphikisana ukuthi kubaluleke kakhulu ukuchaza umjikelezo we-hermitage. Okusho ukuthi, emva kokufaka i-powder ne-concealer, udinga ukugqamisa amnyama omnyama endaweni yesikhumba, i-cheekbone nethempeli. Lokhu kuzokwenza ubuso bubheke ngokwendalo futhi bukhangele.
Isici esibalulekile - izipikili
Ngentombazane, ukugcoba okuhle kubaluleke kakhulu. UKim uhlale enefayela le-nail. Phela, awukwazi ukuthi yini engenzeka. Ngokungazelelwe uyisipikili noma uyayibamba. Njalo uphathe ifayela le-nail esikhwameni sakho! Ngaphezu kwalokho, ukuthi isikhwama seWanda kufanele sibe yinto yonke!
Manicure Kim wenza kuphela amakhosi aphezulu. Uhlala egcina izipikili zakhe ngokuhlelekile. Inkanyezi ikholelwa ukuthi kufanele ibe neyomumo ophelele ohlangothini.
UKim akazange alele, ekhohlwa ukugeza izimonyo zakhe. Lena yindlela ebaluleke kakhulu ngaphambi kokulala. Isikhumba sethu sidinga ukuphumula kanti ngenkathi silala, kuyakwenza. Ngakho-ke ungakhohlwa ukugeza ngaphambi kokuya etafuleni. Futhi emva kwalolu hlelo, qiniseka ukuthi usula ubuso bakho nge-tonic noma lotion, bese usebenzisa ukhilimu obusweni. Lo mkhuba kusihlwa kufanele ube umkhuba.
Imodeli ithi, njengabanye abafazi, ibuye ihole ukulwa okungapheli ngokumelene ne-cellulite. Lena inkinga yethu embi. Ngakho-ke akunakwenzeka ukuphumula. Ukudla kwethu kufanele kube nokuphilile futhi okunengqondo. Akazivumeli kakhulu. Ikakhulukazi ukhohlwe ngokudla okusheshayo. Ngesikhathi ekuseni uKim udla i-oatmeal, futhi ngesidlo angadla inkukhu ebilisiwe. Ngakho uma ufuna isithombe esihle, udinga ukulandelela ukudla kwakho.
UKim ungumfana nje womzimba. Uyakuthanda lapho umzimba wakhe uchithwa. Intombazane ithanda ukuya kwilalarium, futhi ngenxa yalokhu udinga ukulungisa isikhumba sakho kahle. Uvakashela ama-spa aseKorea, lapho umzimba wakhe uhlanjululwa kahle ekukhumbeni. Kodwa ungayenza ekhaya lakho, into esemqoka ukukhetha izimonyo zekhwalithi ezingabhekana ngokuphumelelayo nomsebenzi wakho.
Manje siyazi izimfihlo ezimbalwa zentombazane ethandwayo yezwe. Mhlawumbe, iseluleko sakhe sizomfanisa futhi, futhi sibonga kubo, sizobe ngcono nakakhulu!
Ukubhekene nokubheja ubuso obusweni
Isikhumba esomile ebusweni: amakhambi asekhaya
Ukuzivocavoca ngomlomo nezihlathi
U-Anna Netrebko washada noJusif Eyvazov. Izithombe zomshado.
Abesifazane abakhulelwe balungiselela ukubeletha
Izitshalo ezingaphandle: i-cypress
Ukuvakasha okushisayo: kanjani ukuthi ungashisi?
Ama-sandwich ane-prosciutto ne-pesto sauce
Amabhola ashizi nama-pistachio namagilebhisi
I-ayisikhilimu yaseNdiya ene-rice noodle
Izinkukhu zezinkukhu ku-ginger marinade
Ukhilimu wasekhaya kusuka ekuguqweni kwesithombe
Ukuklama futhi ngaphakathi kwendawo yokuphumula